Fitsipika momba ny fiainana manokana | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Miorina amin'ny "Act on the Protection of Personal Information" izay nanomboka tamin'ny aprily 2005, ny "Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward" (izay antsoina hoe "ny Fikambanana") dia manaiky ny maha-zava-dehibe ny fampahalalana ho an'ny isan'ny mpanjifa., Hanao izao manaraka izao izahay.
XNUMX. XNUMX.Inona ny mombamomba anao?
Ny "mombamomba anao manokana" ato amin'ity fikambanana ity dia manondro ny fampahalalana rehetra voasoratra anarana rehefa manafatra tapakila, sns. (Manokana, ny fampahalalana rehetra azo fantarina momba anao, toa ny anaranao, ny adiresinao, ny nomeraon-telefaona, ny nomeraonanao fax, ary ny fampahalalana momba ny adiresy mailaka)
XNUMX. XNUMX.Fampiasana fampahalalana manokana
Ankoatry ny fandefasana ny tapakila tadiavina sns aminao ary ny fanaovana fifandraisana maika noho ny fanafoanana ny fampisehoana dia manana ny tanjona manaraka ireto ny mombamomba ny mpanjifa nomena rehefa mividy ny tapakila sns. Tsy hampiasaiko irery ho an'ny.
Mandefa mailaka mivantana amin'ny mpanjifa
Manome serivisy isan-karazany
Raha tsy misy antony marim-pototra (ohatra, fandefasana fanodinana), dia tsy homenay ny antoko fahatelo ankoatry ny mpiara-miombon'antoka sy mpandraharaha.Ankoatr'izay, rehefa ny raharaham-barotra any ivelany dia mankany amin'ny antoko fahatelo ao anatin'ny elanelam-potoana ilaina, dia hanery ny outsourcee izahay hitantana fatratra ny mombamomba ny tena sy hanara-maso izany.
XNUMX. XNUMX.Fitantanana fiarovana ny mombamomba anao
Mikasika ny mombamomba anao manokana dia handray fepetra fisorohana loza sy fepetra azo antoka izahay manoloana ny fidirana tsy ara-dalàna, fahaverezana, fanimbana, fanaovana hosoka, famoahana, sns.
XNUMX.Fandaminana / rafitra / fanabeazana
Ny fikambanana dia hametraka fitsipika momba ny fikirakirana ny mombamomba ny tena, hanazava ny tompon'andraikitra amin'ny fitantanana, ary hitazona rafitra iray hanarahana ny fiarovana ny mombamomba anao.Ho fanampin'izany, hampianarinay ny mpiasa momba ny fiarovana ny mombamomba ny tena sy hampahafantatra azy ireo.
XNUMX.Fanambarana / fanitsiana ny mombamomba anao sns.
Raha te hampiharihary na hanitsy ny mombamomba azy manokana ny mpanjifa dia hamaly avy hatrany izahay ao anatin'ny faritra mety sy ilaina.
XNUMX.Fanarahana ny lalàna sy ny lalàna
Ny Fikambanana dia hanaraka ny lalàna sy ny lalàna ary ny fitsipika mifandraika amin'ny fiarovana ny mombamomba ny mpanjifa.Ho fanampin'izay, handinika sy hanatsara hatrany ny atin'ity politika ity izahay.
9:17 ka hatramin'ny XNUMX:XNUMX